5 gọọmenti rụrụ na Dublin | Akụkọ Njem
5 gọọmenti rụrụ na Dublin
Mariela Carril | | ulo, Dublin
Dublin bụ obodo nwere ezigbo njem nleta. Ndị Irish enweghị ihe jikọrọ ha na ndị agbata obi ha bụ ndị Bekee, yabụ ozugbo ị gafere, ị zutere ndị mmadụ na-adị njikere ikwu okwu, ịmụmụ ọnụ ọchị ma soro gị na-emekọrịta ihe n'ụlọ mmanya ma ọ bụ n'okporo ámá.
N'ime ọnwa ole na ole, na Machị, Ireland dum ga-eme ụbọchị St. Patrick ma ọ bụrụ na ị na-achọ oge kachasị mma iji gaa, egbula oge, nke a bụ ya. Yabụ, ọ dị ka ihe kwesịrị ekwesị ịhapụ ụfọdụ ederede Gọọmenti rụrụ na Dublin. Na-ehi ụra ọnụ ala, ị ga-enwekwa ego fọdụụrụ gị.
1 Ellọ mbikọ Isaacs
2 Jacobs njem
3 Globetrotters Tourist istlọ mbikọ
4 Oliver St. John Gogarty ụlọ mbikọ
5 Fieldlọ mbikọ Ashfield
Ellọ mbikọ Isaacs
Hostlọ mbikọ a ọ dị nso na ọdụ ụgbọ oloko na ọdụ ụgbọ ala, na etiti Dublin. Ọ na-arụ ọrụ na winery mara mma nke narị afọ nke XNUMX, weghachite ma kwadebere ịnabata ndị njem.
Ọ bụ ụlọ mbikọ maka ndị na-eme njem azụ azụ na ezi ahịa: gwọ na-amalite na euro 14 kwa onye kwa abalị ọ na-enyekwa nnukwu ikuku na nloghachi, yabụ ị ga-eme ndị enyi ma ọ bụ ndị njem njem ozugbo.
O nwere kichin, ebe a na-asa akwa na ndị ọrụ nwere ezigbo ozi ndị njem iji hazie njegharị gị. Enwere 4-16 akwa dorms mbuaha, ulo akwa ulo nke ulo nke ano, Ibé akwụkwọ na ihicha bụ free na otu ihe ahụ bụ ìhè nri ụtụtụ na-awa.
Enwere mpaghara telivishọn nwere ọtụtụ osisi na ikuku ikuku, ọzọ maka ịgụ na ụlọ egwuregwu. A kwadebere kichin n'ụzọ zuru ezu, a na-akọrọ ụlọ ịsa ahụ, enwere igbe nke ị na-akwụ ụgwọ dị oke ala (euro 2), sauna na-akwụghị ụgwọ, WIFI n'efu A na-eje ozi Pizza a na-akwụghị ụgwọ n’ebe ọhaneze na-ehihie Tuesday n’abalị Tuesday.
Slọ mbikọ Isaacs dị na Lane nke French 2.
Ọ bụ nnukwu ụlọ mbikọ na Ulo 69 na akwa 420. Ọnọdụ ya dị mma, nke dị n'etiti etiti ihe ahụ, na Ogwe Templelọ Nsọ.
Onyinye ime ụlọ na ụlọ obibi ndị ọzọ. Ndị nke mbụ nabatara n’etiti otu na mmadụ anọ ma dị mma maka ndị di na nwunye ma ọ bụ obere ìgwè, ndị mmadụ na-achọ ohere nke aka ha, ọbụlagodi na ọ dị obere. Ime ụlọ niile juputara na mmiri ozuzo, telivishọn, draya ntutu, akwa nhicha, WiFi na nchekwa.
Enwere mmadụ anọ na atọ, mmadụ abụọ na ejima. Maka akụkụ nke ha, a na-ekewa ime ụlọ iberibe n'ime nke pere mpe, ebe n'etiti mmadụ isii na asatọ na-ehi ụra, na ndị na-ajụ ajụ n'etiti ndị 10 na 12. Ogbe ndị ahụ nwere ìhè nkeonwe, ákwà ngebichi, plọg. Ime ụlọ ịwụ ahụ dị mma, ọ bụ ezie na ọ dị na paseeji, enwere ime ụlọ ịwụ ahụ.
Hostlọ mbikọ a na-ahazi ịga ije site na Dublin na abalị ndị ahụ na-aga n'etiti ụlọ mmanya akpọrọ ụlọ iri ari nke a ma ama na nke ụwa niile. Ide akwụkwọ ọ bụ ihe amamihe dị na ịga na weebụsaịtị n'ihi na a na-enyekarị onyinye pụrụ icheIji maa atụ, ekeresimesi a enwere ego 25% maka ịnọ abalị atọ ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na ị debe akwụkwọ ruo ụbọchị 14 tupu oge eruo ị nwere mbelata 12%.
Ọ bụrụ na ọ bụ ụbọchị ọmụmụ gị n’ụbọchị ebeobibi ị nwere ya n'efu, Nanị site na izipu ozi email na foto nke paspọtụ gị ma ọ bụrụ na ị bụ onye egwu, otu n'ime ndị dị mma, ị nwere ike ịbụ abụ na ụlọ mbikọ ma nweta ụra efu.
Hostlọ mbikọ a ọ dị nso na ọdụ ụgbọ ala Dublin, Nkeji 15 na-aga site na Ogwe Templelọ Nsọ. Ọ dịkwa nso na Customs na naanị nkeji ise si O'Connell Street ma ọ bụ 10 si Parnell Square ma ọ bụ Trinity College.
Regwọ gụnyere nri ụtụtụ kọntinent ma ugbu a ọ bụ euro 69 kwa abalị n'ime ime ụlọ abụọ, euro 29 n'ime ụlọ akwa anọ na gburugburu 20 euro maka ime ụlọ buru ibu. Jacobs Inn dị na 21 - 28 Talbot Ebe.
Globetrotters Tourist istlọ mbikọ
Na-arụ ọrụ n'ime otu narị afọ ụlọ ke ufọt Dublin, ije ije dị nkeji abụọ site na O'Connell Street. Can nwere ike ịgagharị site na ịga ije ebe niile.
Ha bụ ụlọ atọ ndị jikọtara ọnụ nke ndị Georgia na-anabata ndị ngụkọta nke ndị 350 na anabataghị ụmụaka ndị na-erubeghị afọ iri na isii. Ime ụlọ niile nwere oke mmiri na ụlọ mposi. Enwere nkeonwe na ime ụlọ na ebe obibi maka ụmụ nwanyị naanị.
Anaghị akwụ ụgwọ mpempe akwụkwọ, ime ụlọ nwere igodo kọmputa, a na-ehicha ha kwa ụbọchị, enwere ese foto na mkpuchi iji hapụ akpa. Got nwere Wi-Fi, tebụl ndị njem nleta, ebe a na-anabata ọfụma na ịsa akwa. Ebe a na-anata otu dị iche iche n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ klọb ma na-enye gị ọrụ nnabata site na ọdụ ụgbọ elu Dublin ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri.
Ime ụlọ abụọ dị n'etiti 50 na 60 euro. Ọ na-anọgide na 47-48 Lower Gardiner Street.
Oliver St. John Gogarty ụlọ mbikọ
Ọ bụ ụlọ mbikọ n'ime Ogwe Templelọ Nsọ. Nwere ụlọ ime ụlọ abụọ na atọ, kichin a kwadebere, ime ụlọ erimeri, ime ụlọ dị iche iche, ime ụlọ ịwụ na ime ụlọ ịwụ ahụ. E nwekwara 4, 6, 8 na 10 akwa ndina na ime ụlọ ejima.
N'ime e nwekwara a restaurantlọ oriri na ọ .ụ traditionalụ nke ọdịnala Irish na menu kwa ubochi na mmanya ebe a na-enwe egwu di egwu. Ọ bụrụ nhọrọ ịrahụ n'ụlọ elu (ya na mmadụ anọ), ọnụego ya bụ site na euro 99 abalị site na Sọnde ruo Tọzdee.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dị mfe karị, ụlọ ndị ahụ nwere ọnụego site na euro 25. Nkwenye niile dị ihe dị ka euro 500 na-akwụ nkwụnye ego nke 50% nke ngụkọta otu ọnwa tupu ya na ịkagbu ihe na-erughị awa 24 tupu a kwụọ ya, karịa ma ọ bụrụ na ọ bụ na ụbọchị dị oke egwu dị ka ụbọchị Saint Patrick ma ọ bụ Afọ Ọhụrụ.
Ọnụ ego dị kwa ụlọ kwa abalị: n'oge dị ala, ọnụ ụlọ abụọ nke ọnụ ụlọ maka mmadụ anọ na-efu euro 99 kwa ụbọchị na 149 na ngwụsị izu, ebe n'oge dị elu ọnụego ahụ bụ 119 na 199 euro n'otu n'otu.
N’agbanyeghi ebe etiti ya, ụlọ mbikọ ahụ dị jụụ ebe ọ bụ na ụlọ emeela ochie, nwee nnukwu mgbidi yana ala osisi, mkpuchi dị mma site na mpụga. Ọ bụ ebe a na-enye ụlọ mbikọ, ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. Ezigbo.
Lọ nkwari akụ a mara mma dị na Anglesea Street.
Fieldlọ mbikọ Ashfield
Hostlọ mbikọ a dịkwa nso na Ogwe Templelọ Nsọ ọ bụ ezie na ọ dị mfe. O nwere ime ụlọ iri abụọ na isii chere ihu D'Olier n'okporo ámá na ọ na-ekewa a mpaghara nke ụlọ ihi ụra na ọzọ nke ụdị ime ụlọ nkwari akụ ndị nwere ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe.
Enwere dorms agwakọta na otu nwanyị. Ha niile nwere ime ụlọ ịwụ na otu ụlọ, ọ bụ ezie na nke kachasị ukwuu nwere ime ụlọ ịwụ nwere ọtụtụ mmiri ọnụ, a na-enye onye ọbịa ọ bụla isi ma nwee ịntanetị na nke ọ bụla.
Ọ bụ ụlọ dị mfe ma dị ọcha, nke nwere akụrụngwa. Ọ dịghị ihe fọdụụrụ. Ọ nwere kichin nkịtị, WIFI n'efu na ntanetị, na-enye ezigbo nri ụtụtụ anaghị akwụ ụgwọ ma nwee tebụl ọdọ mmiri.
Dorms nwere ọnụego nke 9 euro kwa onye ọ bụla na ụlọ nkeonwe na-efu euro 18 kwa onye. Ọ dịghị ihe ọjọọ.
Ọfọn, ndị a bụ ndetu anyị na Gọọmenti rụrụ na Dublin, ebe dị ọnụ ala, nke dị mma, ebe i nwere ike iso ndi mmadu kpakọrịta ma ghara imefu nnukwu ego. O doro anya na onye ọ bụla nwere ebe nrụọrụ weebụ nke aka ya maka ozi ndị ọzọ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime ha nwere mmasị na gị, anyị na-atụ aro na ị gaghị akwụsị ileta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Dublin » 5 gọọmenti rụrụ na Dublin
Gaa Oslo, ihe ị ga-eme ma mee n'isi obodo Norway I
Getaways na-enwe Christmas na a dị iche iche ebe